Ch 6 Luke – 2azụ
Home / Bible / Oziọma Luk / Ch 6 Luke
6:1 Ugbu a, ọ mere ka, na nke abụọ mbụ izu-ike, dị ka ọ gabiga n'ọka, -eso ụzọ ya kewara ndị oko ọka na-eri ha, site rubbing ha n'aka-ha.
6:2 Mgbe ahụ, ụfọdụ ndị Farisii sịrị ha, "Gịnị mere unu na-eme ihe iwu na-akwadoghị na ubọchi-izu-?"
6:3 Na-aza ha, Jizọs kwuru, sị: "Ùnu agughi a, ihe Devid mere mgbe agụụ gụrụ ya, na ndị ya na ha nọ?
6:4 Ọ banyeghị n'ụlọ ezi Chineke, , were achicha nke Presence, richapụ, ma nye ya ndị ya na ha nọ, ezie na ọ bụ Iwu akwadoghị ka onye ọ bụla na-eri ya, ma e wezụga ndị nchụàjà naanị?"
6:5 Na ọ sịrị ha, "N'ihi na Nwa nke mmadụ bụ Onyenwe, ọbụna nke Sabbath. "
6:6 Ma ọ mere na, on ọzọ Sabbath, ọ banyere n'ụlọ nzukọ, na ọ na-akụziri. Na e nwere otu nwoke e, na aka nri ya kpọnwụrụ akpọnwụ.
6:7 Na ndị odeakwụkwọ na ndị Farisii hụrụ ma ọ ga-agwọ na-izu-ike, ka ha wee si otú chọta akwukwọ-nmegide imegide ya.
6:8 Ma n'ezie, ọ maara echiche ha, na mere, ọ sịrị nwoke ahụ aka ya kpọnwụrụ akpọnwụ, "Bilie, guzo n'etiti." Ma ebili, o we guzo ka.
6:9 Jizọs wee sị ha: "M na-arịọ gị ma ọ bụrụ na ọ bụ ihe iwu kwadoro na-izu-ike na-eme ezi, ma ọ bụ ime ihe ọjọọ? Iji na-enye ahụ ike na a ndụ, ma ọ bụ ibibi ya?"
6:10 Na-achọ gburugburu na onye ọ bụla, ọ sịrị nwoke ahụ, "Ịgbatị aka gị." O akp o. Na aka-ya e weghachiri.
6:11 Mgbe ahụ, ha na-jupụtara na ara, na ha na-atụle ha na ibe, Kedu, ọ kachasị, ha nwere ike ime banyere Jizọs.
6:12 Ma ọ mere na, n'ụbọchị ndị, ọ pua a ugwu na-ekpe ekpere. Na ọ bụ na ekpere nke Chineke n'abalị dum.
6:13 Na mgbe ìhè bịarutere, ọ na-akpọ-eso ụzọ ya. Na ọ họọrọ iri na abụọ n'ime ha (bụ ndị ọ kpọkwara Ndịozi):
6:14 Simon, onye ọ na-akpọkwa Pita, na Andru nwanne ya, Jems na Jọn, Philip na Bartholomew,
6:15 Matiu na Thomas, James of Alphaeus, na Saịmọn onye a na-akpọ Zealot,
6:16 na Jud nke James, na Judas Iskarịọt, bụ onye a sabo.
6:20 Na-eweli anya ya-eso ụzọ ya, o kwuru, sị: "Gọziri agọzi ka ị ogbenye, n'ihi na ọ bụ gị nwe alaeze Chineke.
6:21 Gọziri agọzi ka unu bụ ndị na-agụụ na-agụ ugbu a, n'ihi na ị ga-enwe afọ ojuju. Gọziri agọzi ka unu bụ ndị na-akwa ákwá ugbu a, n'ihi na ị ga-achị ọchị.
6:22 Gọziri agọzi ka ị ga-abụ mgbe ndị mmadụ ga-kpọrọ asị gị, na mgbe ha ga na-iche ị ma na-akọcha gị, na tụpụrụ aha gị dị ka ma ọ bụrụ na ihe ọjọọ, n'ihi na nke Nwa nke mmadụ.
6:23 Nwee obi ụtọ na na na ụbọchị na-adara. N'ihi na, le, ụgwọ ọrụ unu dị ukwuu n'eluigwe. N'ihi na ndị a otu ihe nna nna ha mere ndị amụma.
6:24 Ma n'ezie, Ahụhụ ga-adịrị gị onye na-bara ọgaranya, n'ihi na ị nwere gị nkasi obi.
6:25 Ahụhụ ga-adịrị gị onye na-afọ ojuju, n'ihi na unu ga-anọ agụụ. Ahụhụ ga-adịrị gị onye na-achị ọchị ugbu a, n'ihi na ị ga-eru uju na-akwa ákwá.
6:26 Ahụhụ ga-adịrị gị mgbe ndị mmadụ ga-agọziwo gị. N'ihi na ndị a otu ihe nna nna ha mere ndị amụma ụgha.
6:27 Ma ana m asị unu ndị na-ege ntị: Iro unu n'anya. Mee ihe ọma ndị kpọrọ gị asị.
6:28 Agọzi ndị na-akọcha gị, na-ekpe ekpere maka ndị na-ekwutọ ị.
6:29 Na ya, na-eti gị na ǹtì, na-enye ndị ọzọ na-. Na site na ya na-ewepụ gị uwe, ajụla inye ya ọbụna gị uwe.
6:30 Ma ekenye niile na-arịọ unu. Na adịghị ajụ ọzọ nke na-enye na-ewepụ ihe bụ nke gị.
6:31 Na kpọmkwem dị ka ị ga-achọ ka ndị mmadụ na-emeso gị, na-emeso ha na-otu.
6:32 Ma ọ bụrụ na ị hụrụ n'anya ndị hụrụ gị n'anya, ihe n'aka bụ n'ihi na ị na? N'ihi na ọbụna ndị mmehie na n'anya ndị hụrụ ha n'anya.
6:33 Na ọ bụrụ na ị ga-eme ezi ndị na-eme gị mma, ihe n'aka bụ n'ihi na ị na? N'ezie, ọbụna mmehie na-akpa àgwà otú a.
6:34 Na ọ bụrụ na ị ga-gbazinye bụ ndị ị na-atụ na-enweta, ihe n'aka bụ n'ihi na ị na? N'ihi na ọbụna ndị mmehie na-agbazinye ndị mmehie, iji nweta otu na nloghachi.
6:35 Ya mere n'ezie, iro unu n'anya. ime ezi, na ibinye, na-enwe olileanya maka ihe ọ bụla na nloghachi. Ma mgbe ahụ ka ụgwọ ọrụ gị ga-adị ukwuu, na ị ga-abụkwa ụmụ nke Onye Kasị Elu, maka ya onwe ya bụ ndị na-emere ndị na-enweghị ekele na ndị ajọ omume.
6:36 Ya mere, ebere, dị nnọọ ka Nna unu na-na-eme ebere.
6:37 Ị ikpe, na ị gaghị-ekpe ikpe. Ekwela ikpe, na ị gaghị ikpe. gbaghara, na ị ga-agbaghara.
6:38 nye, na ya ga-enye gị: a mma ezu, ekwewo na maa jijiji ọnụ, nke jubigakwara ókè, ha ga-edebe gị n'apata. N'ezie, otu ụfọdụ ị na-eji tụọ, a ga-eji tụọ azụ gị ọzọ. "
6:39 Ugbu a, ọ gwara ha ọzọ tụnyere: "Olee otú ndị ìsì na-edu ndị kpuru ìsì? Hà agaghi ma adaba n'olulu?
6:40 The eso ụzọ bụ aka onye nkụzi ya. Ma onye ọ bụla ga-zuo okè, ma ọ bụrụ na ọ bụ ka onye nkụzi ya.
6:41 Gịnị mere na ị na-ahụ okporo ọka dị na nwanna gị anya, mgbe log nke di na gị onwe gị anya, ị na-adịghị tụlee?
6:42 Ma ọ bụ olee otú ị pụrụ isi sị nwanna gị, 'Nwanna, ekwe ka m wepụ irighiri ahịhịa n'anya gị,'Ma ị na-adịghị ahụ ndị log na gị onwe gị anya? Onye ihu abụọ, akpa-ewepu log si gị onwe gị anya, na mgbe ahụ ị ga-ahụ nke ọma, ka unu wee na-edu si irighiri ahịhịa n'anya nwanna gị.
6:43 N'ihi na ọ dịghị osisi ọma nke na-amịpụta mkpụrụ ọjọọ, ọ dịghịkwa ihe ọjọọ ịmị ezi mkpụrụ.
6:44 N'ihi na onye ọ bụla na osisi ọ bụla a mara site na mkpụrụ ya. N'ihi na ha adịghị akpọkọta mkpụrụ fig n'ogwu, ma ọ bụ ka ha na-akpọkọta grape si ogwu ohia.
6:45 A ezi mmadụ, si ezi ụlọ nkwakọba ihe nke obi ya, awade ezi ihe. Na onye ọjọ, n'aka ajọ ụlọ nkwakọba, awade ihe ọjọọ. N'ihi na nke ukwuu nke obi, na ọnụ na-ekwu.
6:46 Ma, gịnị mere i ji akpọ m, 'Onyenwe anyị, Jehova,'Ma ghara ime ihe m na-ekwu?
6:47 Onye ọ bụla na-abịakwute m, na-ege ntị n'okwu m, na-eme ha: M ga-ekpughe gị ihe ọ bụ dị ka.
6:48 Ọ bụ dị ka onye na-ewu ụlọ, onye gwuru miri na tọrọ ntọala n'elu oké nkume. Mgbe ahụ, Mgbe idei mmiri ahụ wee, osimiri e jighị ọsọ megide-na-ulo, na ọ bụ enweghị ike ịkwaga ya. N'ihi na ọ e tọrọ ntọala n'elu oké nkume.
6:49 Ma onye ọ bụla na-anụ ma ọ dịghị eme: ọ bụ dị ka a nwoke-ewu ụlọ ya n'elu ala, enweghị a ntọala. Osimiri bugara megide ya, na ya anya ọduọ, na mbibi nke ndị na-na-ulo dịkwa ukwuu. "